American Airlines vasina kubatira vashandi vanowana COVID vari vega
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » American Airlines vasina kubatira vashandi vanowana COVID vari vega
Airlines • avhiyesheni • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
American Airlines ndege yevashandi
American Airlines 'mutemo mutsva unoreva kuti vasina kuvharirwa vanouya pasi neCOVID-19 vanofanirwa kushandisa avo vega mazuva ekurwara chero nguva yavanoda kuti vabve pabasa. Izvi zvinogumisa kurwara kwakakosha kubva kuAmerica kwainge kwagadzwa mushure mekunge coronavirus yatanga kutamba - yeiyo isina kuvharwa, ndokuti.
Kana COVID-19 yakatanga kuoneka, makambani mazhinji akatamiswa kuti aite denda zororo kune avo vakaburuka necoronavirus.
Zvino izvo Chikafu neDrug Administration zvine mushonga unobvumidzwa kupikisa COVID-19, izvi zviri kuchinja kumeso kwekuti makambani ari kuda kuitirei vashandi vayo vanosarudza kusabaiwa jekiseni.
Mazhinji matsva emahara mazuva ano anodikanwa kuratidza humbowo hwehutachiona kupedzisa maitiro ekuhaya.
Bumbiro idzva rinozotanga kutanga kwaGumiguru kune vasina-vaxxers, zvisinei, vashandi veAmerican Airlines vakabaiwa majekiseni vachiri kufukidzwa nemutemo wezvekusiya denda uye havafanirwe kushandisa avo vega mazuva ekurwara kutora nguva kubasa kuti vawane tsime.
Izvi zvinoita kunge zvinoitika pakati pendege, sezvo Alaska Airlines yatadzisawo vashandi vasina kubhadharwa kushandisa mubhadharo wakakosha weECOVID-19 wekushaya basa nekuda kwehutachiona.
Kwete izvozvo chete, Alaska Airlines iri kupa mubayiro vashandi vayo nemabhonasi emadhora mazana maviri ekubaiwa jekiseni, uye vese vashandi vatsva vari kuenda kumberi vanofanirwa kuratidza humbowo hwejekiseni vasati vabhadharwa zviri pamutemo. Ndege iyi iri kudawo vashandi vese vasina kubaiwa nhomba kuti vatore chikamu muchirongwa chekudzidzisa majekiseni.
Mwedzi weLas, United Airlines yaive yekutanga mutakuri weUS kuda majekiseni evashandi vayo vepamba. United ine 67,000 vashandi muUS uye ese matsva emari aifanirwa kuratidza humbowo hwejekiseni kubva muna Chikumi wa2021. Mumahofisi emakambani eUnited, vashandi vasina kukamurwa vanofanira kupfeka masiki ekumeso.
Frontier Airlines inodawo kuti vashandi vange vabaiwa jekiseni zvizere naOctober 1 wegore rino. Vaya vashandi vanosarudza kusabaiwa majekiseni vanozodikanwa kuti vatore chikamu mukuyedzwa kweCOVID-19.
Dzimwe ndege vari kuyedza kuti vashandi vavo vabaiwe jekiseni sezvakaitwa neAlaska Airlines nekupa zvinokurudzira sekuwedzera mubhadharo kana kubhadharwa nguva yekuzorora.
Chii chiri kukonzera shanduko idzi?
apo Federal Drug Administration (FDA) yakabvumidza Pfizer semushonga, izvi zvakavhura magedhi emakambani ekushandura marongero avo eCOVID-19, sezvo ichi kazhinji chiri chikonzero chaishandiswa nevashandi vasingade kubayiwa jekiseni - kuti hapana mushonga wakabvumidzwa zviri pamutemo.
Ndege dzichiri kuda kuti vese vari mubhodhi vapfeke mamask kwenguva yekufamba, kunze kwekudya kana kunwa, hongu.